Blu Studio 6 HD Ekwentị | Site na Linux
The Blu Studio 6.0 HD bụ 6-anụ ọhịa phabet na ezigbo mma atụmatụ na-atụle ya price.
La ika Blu anọwo na-enweta ọtụtụ ala na Latin America na United States, jisiri ike n'ime afọ ole na ole mepụta ọmarịcha ekwentị dịka Blu Life 8 na kpomkwem Studio 6.0 HD.
Njirimara nke Blu Studio 6.0 HD ekwentị mkpanaaka dị ka anyị kwuru na ha dị ezigbo mma na-atụle ụgwọ ha. Ọ nwere ihuenyo 6-anụ ọhịa na mkpebi nke 720 x 1280 pikselụ, nke a pụtara na ọ bụ HD, agbanyeghị, mkpebi ahụ bụ otu ihe ahụ dị ka obere ekwentị ndị ọzọ, nke a pụtara na a ga-enwe pikselụ kwa elekere kwa nke obere na obere ngebichi kwa ihe anyị nwere ike ịhụ nkọwa ndị ọzọ, na okwu ndị ọzọ obere ngebichi na otu mkpebi ga-adị mma karịa.
Nhazi nke Blu Studio 6.0 HD ekwentị mkpanaaka Ọ bụ quad-core na 1.3Ghz, nke a zuru oke maka ọtụtụ ngwa dịnụ, ọbụlagodi maka egwuregwu kachasị achọ, n'ihe gbasara RAM anyị nwere 1GB na nchekwa anyị ga-enwe naanị 4GB nke ị ga-ewepu ohere eji maka Sistemụ, enwere oghere SD maka nchekwa 32GB.
Isi ụlọ nke Blu ekwentị Ọ bụ 8 megapixels na igwefoto dị n'ihu bụ 2 megapixels, igwefoto abụọ dị mma ma ị nwere ike iji foto mara mma. Batrị anaghị ewepu, ọ bụ 3000 mAh, nke na-eme ka ihe karịrị otu ụbọchị nchaji na-enweghị nsogbu.
Sistemụ nrụọrụ bụ gam akporo 4.2 nke kwalite na 4.4.2 Kitkat. Ọ Blu Studio 6.0 HD ọnụahịa Ọ bụ $ 3,399 pesos, ọ bụ ọnụ ahịa ezi uche dị na ya tụlere njirimara o nwere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » Blu Studio 6 HD ekwentị